ब्यारोलोचेका लागि--दिनको यात्रा - अर्जेन्टिना 1aviagem.com
अघिल्लो पोस्ट: Mayans र संसारको अन्त को पूर्वानुमान - मेक्सिको
अर्को पोस्ट: आउटबर्स्ट - ब्रासिलिया - ब्राजील
पोष्ट गरिएको १ महिना अघि द्वारा रोमोमो लुकाना
ब्यारोलोचेका लागि-दिने यात्रा - अर्जेन्टिना
र क्वारेन्टाइनको समयमा पुरानो एल्बम लिनु र फोटोहरू हेर्नु भन्दा राम्रो अरू केही छैन। जसले मलाई अर्जेन्टिनामा रहेको बारिलोचेमा पहिलो पटक यात्रा गर्यो।
म शहरमा3दिन मात्र बसेँ, र दुई स्टेशनहरू समात्न म सफल भएँ। सूर्य र हिउँ र हो, यस पोष्टमा यी फोटोहरू मेरो पहिलो क्यामेराको साथ लिइएको हो ... करीव १० बर्ष पहिले। मैले निर्णय गरे कि म तिनीहरूलाई छुने छैन, म टार्टलेटहरू छोडिदिन्छु, धमिलो हुन्छ, सबै विचार पछि स्क्रिप्ट बताउनुपर्दछ र तपाईं फोटोहरू भन्दा शहर कति सुन्दर हुनुहुन्छ भन्नेमा तपाईं छक्क पर्नुहुनेछ। यो आकर्षण हो! तल केहि चित्रहरु अनुसरण गर्नुहोस्।
ब्यारोलोचमा days दिनमा के गर्ने?
१- पर्यटक सूचना केन्द्र भ्रमण गर्नुहोस्।
यो पर्यटन शहर मा के गर्ने को पहिलो सुझाव को रूपमा यो स्पष्ट लाग्न सक्छ। तर पर्यटन सम्बन्धी जानकारी र शहरमा के भइरहेको छ यसका लागि त्यहाँ अर्को कारण पनि छ। बारिलोचेको पर्यटन केन्द्र भनेको आइकनिक सानो घर छ, वा बरु, भवन जहाँ शहर हल र पर्यटक केन्द्र अवस्थित छ। यो ठाउँ हो जुन तपाईंले सायद फोटोहरूमा देख्नु भएको छ। यी फोटोहरू हेर्नुहोस्।
२- प्याटागोनिया फ्रान्सिस्को पेरिटो मोरेनोको संग्रहालय
अब जब तपाइँसँग पर्यटक सूचना र शहरको नक्शा छ, मैले सुझाव पाटागोनिया फ्रान्सिस्को पेरितो मोरेनोको संग्रहालय भ्रमण गर्न भनेको छ। कारण किनभने यो शाब्दिक रूपमा पर्यटक केन्द्रको पक्षमा छ र यो भवनको अंश पनि हो।
अझ बढी, यसले तपाइँको अर्को गन्तव्यलाई कायम राख्न मद्दत गर्दछ, जुन नहुएल Huapi राष्ट्रीय पार्क हो। यस संग्रहालयको नाम संस्थापकले दिएका छन: फ्रान्सिस्को पेरितो मोरेनो। उहाँ एक यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जसले आफ्नो समय भन्दा परिकल्पना गर्नुभयो। (र धेरै धनी पनि!) उनले केवल आफ्नो स्वामित्वको जग्गा दान गरे, नाहुएल हुआपी ताल नजिकै। यो 550० किलोमिटर ताल जसमा हामी एन्डिज पर्वतहरू मिरर गरिएको देख्छौं र अर्जेन्टिनामा सबैभन्दा सुन्दर परिदृश्यमध्ये एक हो। उनले निम्नको बारे सोचे: मेरो मृत्यु पछि, यो सबै वातावरण, यो परिदृश्य अवस्थित हुनेछ। प्रगतिले घरहरू निर्माण गर्नेछ, बरफ पग्लनेछ, ताल प्रदूषित हुनेछ, र यो सबै समाप्त हुनेछ। यसैले यी सबैको संरक्षण गर्न वर्तमान र भविष्यका पुस्ताहरूका लागि म अर्जेन्टिना सरकारसँग एउटा सम्झौता गर्नेछु कि म यी जग्गालाई चन्दा दिन सक्दछु, जबसम्म उनीहरूले यस क्षेत्रलाई वातावरणीय संरक्षण पार्कको रूपमा कायम राख्न प्रतिबद्ध गर्दछन्। र त्यो उनले गरे। फ्रान्सिस्को पेरितो मोरेनो एक महान पर्यावरणविद् थिए र वास्तवमा त्यो एक मिसनको रूपमा थियो। सम्झौता गरिएको थियो र पार्क आज सम्म अर्जेन्टिनी सरकार द्वारा राखिएको छ। यदि तपाईंलाई बारिलोचेको प्राकृतिक सौन्दर्य थाहा छ भने, संग्रहालय भ्रमण गर्नुहोस् र यस पार्कलाई मद्दत गर्न मद्दत गर्नुहोस्।
3- नहुएल Huapi राष्ट्रीय पार्क
खैर, अब जब तपाइँ पार्क को इतिहास थाहा छ, कसरी यो भ्रमण को बारे मा?
पार्क एकदम विस्तृत छ, यो एन्डिज पर्वतहरूको वरिपरि along० किलोमिटर लामो छ। र यो चिलीसँग सीमा छ, अर्जेन्टिना प्याटागोनियाको क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ। बारिलोचे यस पार्क बीचको मुख्य शहर हो। (हो, मुख्य एक, यस विस्तारमा अन्य शहरहरू र प्रान्तहरू छन्)।
पार्कमा clearly स्पष्ट रूपमा फरक वातावरणहरू छन्: उच्च भूमि, आर्द्र वन र प्याटागोनियन स्टेप। लायक जाँच गर्दै। यस क्षेत्रमा धेरै फरक जीवजन्तु र वनस्पति बाहेक यससँग ज्वालामुखी, झरना, हिमनदी र विभिन्न पर्यटन विकल्पहरू पनि छन्। कम्तिमा एक दिन भ्रमण गर्नु आवश्यक छ, किनकि स्थानहरू एक अर्कादेखि टाढा छन् र त्यहाँ प्रवेश र बाहिर निस्किने समयहरू छन्। अधिक जानकारी यहाँ: http://www.nahuelhuapi.gov.ar/turismo/circuitos_auto.html
- सेरो क्याम्पानारियो
पक्कै पनि सबैभन्दा सुन्दर ठाउँहरू मध्ये एक म कहिल्यै भएको छु। अर्जेन्टिनामा सबैभन्दा पूर्ण स्की सेन्टर रहेको ठाउँमा यो स्थान हो। स्की स्लोपहरू कठिनाईको डिग्रीहरूले विभाजित गर्छन् (त्यहाँ 50० भन्दा बढी छन्)। त्यहाँ पुग्ने उत्तम तरिका भनेको तपाईंको होटेल वा होस्टलको रिसेप्शनमा बुकिंग गर्नु हो। त्यसोभए एउटा बस होटलको ढोकामा आउँदछ र तपाईंले चिसो पर्खनु पर्दैन। स्थान स्कीइ forको लागि बढी हो। तर तपाईं चाहानु हुन्न भने पनि, म जानको लागि सिफारिश गर्दछु। र केबल कार चढ्नुहोस्। दृश्यबाट दृश्यले ज्वालामुखी, पर्वत, ताल र पाठ्यक्रममा ब्यारोलोच कभर गर्दछ। मसँग फोटो राख्नेछु। र ठाउँ को साइट जुन कभरमा पहिले नै मसँग कुरा गर्दैछु को फोटो छ। यदि यो हिउँ मौसममा छैन भने पनि त्यहाँको दृश्य प्रभावकारी छ। मेरो लागि जानुहोस्, दृश्य तपाईको टाउकोमा गडबड हुनेछ, तपाइँलाई समस्याहरू बिर्सनुहोस्। (केवल चिसो hahaha नबिर्सनुहोस्)।
यो यस्तो हुन सक्छ कि बतास, भारी हिउँ पर्न, वा भारी वर्षाको कारण सेपल पहाड बन्द छ। नतिजाको रूपमा, गतिविधिहरू जोखिमबाट बच्न बन्द गरिएका छन्। तर यदि तपाईं साँच्चिकै आइस स्केट गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने, त्यहाँ पनि ब्यारोलोचेमा इनडोर आइस रिंक छ। यो इच्छा मार्न कार्य गर्दछ।
Bar- बारिलोचे प्यालेओन्टोलजिकल संग्रहालय
यो अन्य संग्रहालय पहिलो भन्दा फरक छ, यहाँ फोसिलमा फोकस गरिएको छ। १ 150० देखि million०० मिलियन वर्ष पहिले। र अन्तमा तपाईं अझै पनि डायनासोर पंजाको प्रतिकृति छुनुहोस्। यो सिभिक सेन्टर नजिक छ, तपाईं खुट्टामा जान सक्नुहुन्छ।
B- बार्बेक्यु खान्नुहोस्, रक्सी र पेय पदार्थ खान्नुहोस्
अवश्य पनि, यस शिखरलाई सहनको लागि तपाईंले धेरै र राम्रोसँग खानुपर्नेछ।
र बारिलोचे विश्वभर मा यसको कारीगर चकलेट, कारीगर बियर, कारीगर वाइन, कारीगर पारीला, ह्यामबर्गर र लगभग तपाईले खान्नुहुने सबै चीजका लागि परिचित छ। त्यहाँबाट बनाइएको, टाढाबाट अर्डर नगरी। म अक्सर भन्छु कि बारिलोचे प्रेमको शहर हो। एउटा अविश्वसनीय परिदृश्य हुनुको साथै, यो अझै चिसो छ, यसमा तातो चकलेट, अल्फाजोर, वाइन स्वाद, बियरहरू छन् ... यहाँ हाम्रोलागि हनीमून खराब छैन। र यो युरोप जाने भन्दा सस्तो छ, र स्टाफले तपाईंको पोर्टुनहोल बुझ्दछ, र तपाईंले त्यहाँ खाने सबै कुरा स्वादिष्ट हुन्छ। यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि यूरो महँगो छ (र हो यो हो!) हेर्नुहोस् अर्जेन्टिनी पेसो कती छ ... यहाँ एक सुझाव छ। वास्तवमा यहाँ ब्लगमा हामीसँग सबै उद्धरणहरू छन् तपाईंको लागि मुद्रा अनुसरण गर्नका लागि:
- सैन कार्लोस डे ब्यारिलोको क्याथेड्रल भ्रमण गर्नुहोस्
यो क्याथेड्रल, पनि भनिन्छ: नोसा सेन्होरा do नहुएल Huapi एक जिज्ञासु वास्तु परियोजना छ। यो नियो-गोथिक शैली हो। क्रसको आकारमा चर्च नेभको साथ, इसाईमतको प्रतिनिधित्व गर्दछ। र यसको हेडबोर्ड बिल्कुल पूर्वमा इंगित गर्दछ। यो डिजाइन गरिएको थियो त्यसैले क्याथेड्रल दिनभर उज्यालो भयो। र सूर्यको किरणले दाग कांचको प्रकाश बनाउन के हुन्छ, दाग गिलास देखि प्रकाश र छाया बीचमा एक आंदोलन बनाउने।
8- हिउँ थाहा छ
यस बिन्दुमा, मलाई थाहा छ तपाईंले याद गर्नुभयो कि ब्यारिलोचमा कहिलेकाँही यसले सुँघ्छ। यदि तपाईंले आफ्नो जीवनमा हिउँ कहिल्यै देख्नु भएको छैन भने, यो राम्रो अवसर हो। तर अब म तपाईंलाई हिउँको बारेमा केहि भन्न दिनुहोस्, तपाईं आफ्नो प्रेमको अनुहारमा हिउँ फ्याँक्नु अघि। हिउँ, फ्लेक्समा खसेको बावजुद, ठोस बनाउन सक्छ, र यदि तपाईंले कसैलाई फ्याँक्न स्नोबल बनाउनुभयो भने यो बरफको बल बन्छ। र यसले वास्तवमा चोट पुर्‍याउन सक्छ, तपाईंको प्रेमको अनुहारमा काट्नुहोस्। त्यसोभए, यात्रा बिग्रन नदिन, हिउँमा खेल्ने ध्यान दिनुहोस्। याद गर्नुहोस्, यो ढु stone्गामा परिणत हुन सक्छ र वास्तवमा चोट पुर्‍याउँछ। यदि तपाईं हिउँमा हिउँ रोल गर्न चाहानुहुन्छ भने पनि यही कुरा सत्य हो। स्नोबल प्रभाव बढ्दै गयो। हेर कि तपाईं के गर्न जाँदै हुनुहुन्छ त्यो बरफ आराको साथ?
Phai, म विश्वास गर्न सक्दिन कि म यी सबै सम्झन सक्दछु! यसैले तस्बिर लिनको लागि यो महत्त्वपूर्ण छ, तपाईंलाई थाहा छैन यदि १० बर्ष पछि तपाई एक ट्राभल ब्लग सेट अप गर्न चाहानुहुन्छ र यसको आवश्यक पर्दछ। जे भए पनि, ती महान सम्झनाहरू हुन्। यो टाढा बनाउनु भएकोमा धन्यवाद। र त्यहाँ रातो बटनमा हामीलाई पछ्याउन नबिर्सनुहोस्। 👉 👉
वा तलको हाम्रो विश्वमा क्लिक गर्नुहोस् यस धन्यको संगरोधमा थप पढ्नको लागि, ताकि तपाईं स्वस्थ हुन सक्नुहुन्छ जब यो कोरोनाभाइरस महामारी समाप्त हुन्छ। (र त्यसपछि तपाइँ फेरि यात्रा गर्न सक्षम हुनुहुनेछ!)
कसरी अर्जेन्टिना बारिलोचे चकलेट एन्डिज पर्वतहरू कसरी रक्सी